Iitatto ezisezantsi ngasemva okanye ezantsi umva I | Ukuzoba
Iitatto kumqolo ongezantsi okanye kumqolo osezantsi mna
UAlberto Perez | | Iitatoo, Iitattoos ngasemva
Akuqhelekanga kakhulu ukubona indoda kuphela kule ndawo
Namhlanje kukujika kwe-lumbar. Awuhlali ubona ezininzi Iitattoo zamadoda ehlala le ndawo kuphela, kodwa endaweni yoko yimizobo ehlala umva uphela njenge sifiso okanye amaMaori; kunye neeTatto ezihlala e-esileni zize ziye kwi-lumbar.
IiTattoos ezikhethekileyo zalo mmandla zihlala ziqhelekile ezona ziqhelekileyo kubafazi, nangona benokwandisa ukuya esinqeni okanye ecaleni (njengeetattoos zezilwanyana ezinambuzelayo, amafu ebhabhathane, iinkwenkwezi, iintyatyambo zeentyatyambo, njl.njl. umzimba wakhe uphela)
Iimpawu zetattoos kwi-lumbar
Ukuhlala kwindawo yangasemva kuyinyama kakhulu
Isiporho: ithathwa njengendawo engenabuhlungu kakhulu; Ngapha koko, kukho izimvo zazo zonke iintlobo ekubeni inyama encinci inendawo, kuya kuba buhlungu ngakumbi ukuyifaka itattoo, kwaye kongezwe ukuba kukho abantu abanolwazelelelo ngakumbi kunabanye.
I-Aesthetics: Ukuba kuphela kwesizathu sokuba uyitattoo kule ndawo kungenxa yokuba kubonakala ngathi kunomdla kuwe ukukuxelela ukuba olu luyilo lubizwa ngokuba yi "Tattoo yeempungutye". Anditsho, ndiyibonile kuzo zonke iinyani zeetattoos zaseMelika (ngasendleleni, ndifumanisa ukuba la magqabantshintshi ngawokuhlazisa avela ebantwini anee-tatoos, nokuba bathanda ntoni)
Kuyabonakala ukuba ngumvambo owathi waba nefashoni phakathi koonongogo Kuba umthengi uyayithanda ngokokwesiphi isikhundla anokuyithathela ingqalelo. Nokuba kunjalo, into ekufuneka uyithathele ingqalelo uyilo ngokuchanekileyo ngenxa yoku, kuba ukhetho olubi lunokuluguqula ulwaphulo-mthetho (Ndikhumbula intombazana ekwakufuneka igubungele enye eyoyikekayo kuba umyeni wakhe wayefumana yonke into phantsi ngalo lonke ixesha eyibona).
Olu luyilo alunalo igama elihle
Kungcono ukhethe uyilo olungasikelwanga mda ekunwebeni ukusuka ngasekhohlo ukuya ekunene njengale ikule foto, kodwa dlala ngenxalenye yomqolo, inyonga okanye icala Ngendlela ebonakalisa inkanuko kwaye ingabonakali.
Kwaye uthini malunga ngqumbo? Ngaba baya kuyibeka kum ukuba ndibhala umvambo kule ndawo? Ndizokuphendula ngomso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitattoos zivuliwe » Iitattoos ngasemva » Iitatto kumqolo ongezantsi okanye kumqolo osezantsi mna
Ndiyazithanda ii-tatoo kumqolo ongezantsi…. Le misebenzi mihle
Iimpawu zetattoo ye-groin
Umvambo kwilungu lobudoda: ndoda, uphambene?